🥇 ▷ Miyaad seegtay furaha ama ma dooneysaa inaad ku celiso? Fiidiyowga rasmiga ah ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple ✅
Miyaad seegtay furaha ama ma dooneysaa inaad ku celiso? Fiidiyowga rasmiga ah ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple
Dhacdadii Apple ee la filaayey sanadka ayaa hadda dhammaaday. Shirkadda Cupertino ayaa soo bandhigtay taxaneheeda cusub ee Apple Watch Series 5, laga bilaabo gacanta cusub ee iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max. Waxaan ogsoonahay in qaar badan oo idinka mid ahi jeclaan lahaayeen inay ku celiyaan furaha ereyga ugu yaraan hal mar, ama in aadan xitaa arki karin dhammaantiin maxaa yeelay waxaad qabaneysay howlo kala duwan maalintiiba.
Hagaag, waxaan haynaa war wanaagsan. Hadda laga bilaabo waxaad arki kartaa furaha Apple oo si deggan u eeg dib-u-eegis kasta oo lagu soo bandhigay halkaas. Shirkadda tufaaxa ayaa ka dhigtay muuqaal buuxa oo muuqaal ah oo qof walba ku leh degelkiisa, waxaana sidoo kale ay ugu dirtay kanaalkeeda rasmiga ah ee YouTube. Sidan ayay suuragal u tahay in dib loo eego hal saac iyo 47 daqiiqo oo ka kooban si aan loo seegin faahfaahinta wixii dhacay.
Fiidiyowgu wuxuu saxay qodobbada Ingiriisiga si ay si fudud u fahmaan waxqabad kasta. Dabcan, xusuusnow in si aad u eegto waa inaad Safari ku isticmaashaa iPhone, iPad ama Mac, ama aad ku leedahay Microsoft Edge kumbuyuutar leh Windows.
Fiidiyowyo wax soo saar ayaa hadda la heli karaa
Laakiin marka lagu daro fiidiyowgaan, Apple waxay u diyaarisay qof kasta oo ka tirsan tooskiisa tooska ah ee YouTube muuqaallada soo bandhiga ee ah iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo Apple Watch Series 5.
Taxanaha Apple Watch 5
Sidoo kale, shirkaddu waxay u soo dirtay soonaheeda rasmiga ah ee TV-ga Apple TV-ga oo ah filimkiisii ​​taxanaha ahaa ‘See’, kaas oo la soo bandhigay intii lagu jiray furaha bisha Sebtember 10. Haddii aad seegtay, halkan ayaad mar kale ku arki kartaa.
La wadaag Miyaad seegtay furaha ama ma dooneysaa inaad ku celiso? Fiidiyowga rasmiga ah ayaa hadda laga heli karaa websaydhka Apple